Hiran State - News: Qilaaf bilaaw ah oo soo kala dhax galay masuuliyiinta Dowlada halka Shabaab awoodooda iskugu geeyeen Sh/Hoose.
Qilaaf bilaaw ah oo soo kala dhax galay masuuliyiinta Dowlada halka Shabaab awoodooda iskugu geeyeen Sh/Hoose.
HS:-Wararka ugu danbeyey Qilaaf bilaaw ah oo soo kala dhax galay masuuliyiinta TGFda halka Shabaab awoodooda iskugu geeyeen Sh/Hoose.
Qilaafyo bilaaw ah oo intooda badan ka dhashay dhaqaalo laga helay deeqahii gargaarka oo la musuq maasuqay ayaa soo kala dhax galay masuuliyiinta TFGda iyadoo ay macquul tahay in ay arintaan kalaafato wasiiro badan maadama TFGda ay u harsan tahay oo kaliya dhawr bilood ayna adagtahay iney mudadaas ku soo celiyaan nabadgalyada guud ee dalka waxne ka qabtaan musuq maasuqa hareeyey shacabka Somaliyeed, maadama wadankii dhamaa kii yimaadaba siduu doono u xaalufinayo.
Dhinaca kale kooxda mayarlka adag ee Shabaab ayaa ugu danbeyn hada go,aansaday iney difaacdaan gobolka Sh/hoose oo ay awoodooda iskugu geeyeen kedib markii uu cadaadis kaka yimdi Mogdisho iyo Jubada Hoose. warar lagu kalsoon yahay ayaa shegaya in dhawrkii maalmood ee ugu danbeysay ciidamo ka socda Shabaab ay soo buux dhaafiyeen magaalooyinka Marka iyo Afgooye iyadoo isku diyaarinaya dagal ay la galaan cidkasta oo ugu timaada degaanadaasi hadey noqon laheyd ciidamo isku abaabulaya qaab qabiil oo reer Galgaduud ah oo uu hogaminayao Indhacade iyo ciidamo magaca TFGda wata oo iyaguna doonaya iney gaaraan goobahaas.
Markas laga soo tago qilaafka hareeyey masuuliyiinta TFGda oo salka ku haya arimo dhaqaalo iyo dhaqdhaqaaqa ay Shabaab ka wadaan gobolka Sh/hoose hadane waxaa isa soo taraya qatarta uu umada Somaliyeed ku reebi doono qorshe howleedka loogu magac daray Road Mapka oo hadii aan la horgeyn baarlamanka ka qatar badan mashruucii Bada Somaliya lagu iibsan rabay.
Dad badan waxa afka looga shegayo iyo qorshaha road Map-ka wax isleh maahan bal si degan u eeg maqaal dheer oo aanu ka soo diyaarinay qatarta arintaasi oo taariikh aad xun ku reebi doonta mustaqbalka umada Soamliyed iyo jiilka soo koraya.
· admin on October 13 2011 13:36:31 · 0 Comments · 1909 Reads ·
14,569,410 unique visits